आफ्नै मृत्युको दिन गन्दै बसेका एक सल्यानी । -Salyan Online
सल्यान अनलाइन, बैशाख ०६, २०७३
स्यानिखाल १ डाग्री सल्यानका ३६ बर्षीय हेमराज बुढाथोकी उनका दुवै मृगौला फेल भएपछि घरमै होम डाइलासिस गर्दै बाचीरहेका छन । पटक पटकको डाइलासिस र पेटबाट निकालिएको पाइको दुखाईले शिथिल भएको शरिर, २ छोरा श्रीमति र बाबुआमाको भबिष्य यस्तै मन भित्र अढिरहने पश्नबाट आजित हुन्छन हेमराज । उनीसँग यि प्रश्नको कुनै उत्तर छैन उत्तर खोज्दा बाँच्न चाहिने उर्जा घटछ । उनि भित्रको अविभावकिय मन भत्त-भत्ति पोल्छ । जब आफ्नै आखा अगाडी मृत्यु एउटा कठोर यथार्थ बनेर उभिदिन्छ ।
अपबाद बाहेक मान्छेले आफ्नो मृत्युलाई स्विकारेर दिन गन्ति गर्नु पर्दैन । त्यस्तै आफ्नै मृत्युलाई स्विकारेर मृत्युको काउन डाउन सुरु गरेका अपबाद हुन हेमराज बुढाथोकी जस्ले पल पल मृत्युलाई धेरै नजिक खचिदै आएको देखेका छन ।
२०७२ साल श्रावण महिनामा समान्य बिरामी परेपछी चेकअप गर्दै जादा २०७२ साल माघमा उनका दुबै मृगौला काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको थाह भयो । डाक्टरको सल्लाह अनुसार ०७२ माघ १९ मा भक्तपुर जिल्ला अस्पतालमा अपरेसन गरेर पेटमा पाईप घुसारिएको छ । दैनिक १५०० सय भन्दा बढिको औषधि खर्च हुन्छ । निम्न आर्थिक अवस्थाका हेमराज जसो तसो पैसाको जोहो गरेर घरमै होम डाईलासिस गरेर जिवन बचाईरहेका छन ।
उनको दुईवटै मृगौला काम नलाग्ने अवस्थामा रहेकोले मृगौलानै प्रत्यारोपन गर्नु पर्ने हुन्छ । बुवा वा आमाले मृगौला दिन्छौ भन्नु भएको छ । बुवा वा आमाले मृगौला दान गर्दा उनको मृगौला प्रत्यारोपन गर्दा लाग्ने मेडिकल खर्च गरिब ८/१० लाख सम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरे । तर आर्थिक अभावमा उनको मृगौला प्रत्यारोपन हुन सेकेको छैन ।
हेमराजका अनुसार बिभिन्न ठाउबाट सहयोगको आश्वासन आएपनि कुनै पनि निकाय वा संघ संस्थाले आजसम्म सहयोग नगरेको गुनासो थियो ।
यदि कहिबाट पैसा जम्मा भयो र मृगौला प्रत्यारोपन भएपनि उनको आयु भनेको बढिमा १५ बर्ष हो । उनि भन्दै थिए कोहि मृगौला प्रत्यारोपन गरेको ४/५ महिनामै मृत्यु हुने रहेछ उनि आफ्नो मृत्युको भबिस्यबानी गर्दै थिए ।
यति भन्दै गर्दा छोरो परबाट दौडदै आयो । पेटबाट निकालीएको पाईपका कारण छोरालाई राम्ररी काखमा दिन सकेनन् । छोरालाई अडेस लगाउदै भने, यो छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाएर राम्रो शिक्षा दिन पाए हुन्थ्यो । यति भन्दै गर्दा फेरी उनको गला अवरुद्द भयो ।
पेटबाट निकालिएको पाईप र पिसाप थैली बाहिरै बोकेका हेमराज काखभरि छोरालाई लिएर माया गर्न सक्दैनन उनको घाउ दुख्छ । सुन्निएको खुट्टा देखाउदै "भने कहिलेकाहि त छोराहरु नजिक नआईदिए बेस हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ" ।
देउखुरी लालमटियाबाट २०५५ सालमा सि.एम.ए र +२ सम्मको अध्ययन गरेका हेमराज सल्यानमा रहेको बेसनेपाल नामको संस्थामा जागिर गर्थे । अहिले कार्यक्रम नभएपछी त्यो पनि रोकिएको छ । आर्थिक अभावले उपचार पनि गर्न सकिएको छैन ।
सहयोगको नाममा गाउकै बन समितिले बिसहजार रुपैया बाहेको अन्य खासै सहयोग जुटन नसकेको उनले बताए । समान्य सिटामोल र जिबनजलको अभावमा जिवन त्याग गर्नु पर्ने देशमा उनको महंगो उपचार कस्ले गरिदिने ?
उनको उपचारकोलागि हामि देश बिदेशमा रहने सल्यानीहरु एक हुन सक्यौ भने उनको मृगौला प्रत्यारोपन हुनसक्छ । किनकी मृगौला दान गर्न उहाकै आमा वा बुवा तयार हुनुहुन्छ । मेडिल खर्च करिब ८/१० लाख लाग्ने रहेछ । "थोपा थोपा मिलेर समुन्द्र बनेझै" हामिले आ-आफ्नो ठाँउ देखि धेर-थोरै आर्थिक सहयोग गरेर उनको जिबन बाच्छ भने हामिले किन नगर्ने ।
उनलाई भेटेपछी मनमा अनेक कुरा खेलिरहे उनलाई भेटेकै दिन काठमान्डौ जानु थियो । एरफोनको ठेटी कानमा घुसारे तारादेबिको गित बज्यो
"सोचे जस्तो हुन्न जिबन, सम्झे जस्तो हुन्न जिवन ।
जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ देखेजस्तो हुन्न जिबन" ।
गाडि आफ्नै गतिमा दौडदै थियो मनमा अनेक तर्कना खेलिरहे मोबाईल डाटा अन गरे भेटदा लिएको उनको २ फोटो फेसबुकमा पोष्ट गर्दै स्टयाटस लेखे ।
"मर्नैपर्छ भन्ने त्यति ठुलो पिर त छैन मलाई, म मरेपछि मेरा २ छोरा श्रीमती र बुवा आमाको बिचल्ली होला भन्ने कुराले मन छटपटिरहन्छ । यति भन्दैगर्दा छोरालाइ अडेस लगाएर कुर्सीमा बसिरहेका हेमराजका आखाका आशुले किनारा खोज्दै थिए, एक छिनको सन्नाटा पछि उनि समाहलीए ।
स्यानिखाल १ डाग्री सल्यानका ३६ बर्षीय हेमराज बुढाथोकी दुवै मृगौला फेल भएपछि घरमै होम डाइलासिस गर्दै बाचीरहेका छन । मृगौला दानगर्न उनकै आफ्नै आमा र बुवा तयार हुनुहुदो रहेछ तर अप्रेसन र मेडिकल खर्चको आभाबमा आफ्नो मृगौला प्रत्यरोपन हुन नसकेको कुराकानिको क्रममा बताए । मलाई काठमाडौँ फर्कन हतारो थियो धेरै कुरागर्न सकिन फेरी अर्को दिन भेट्ने बाचासहित हामी छुटियौ ।
कृपया उहाँको लागि केहि गर्न सकिन्छ कि ? "
मेरो फेसबुको स्टाटसलाइ लिएर केहि मित्रहरुले सहयोगको ईच्छा देखाउनु भएको थियो भने यहि स्टयाटसलाई लिएर सहयोग गर्न ईच्छुक रहेको भन्दै म्यासेज गर्नु भएको थियो । कृपया उनलाई सहयोग गर्न कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने ।
हेमराजले आफ्नो उपचारार्थ सहयोग संकलनका लागी सबै सल्यानी तथा देशबासीहरुलाई आग्रह गरे । उनलाई सहयोग गर्न चहानुहुने महानुभावहरुले हेमराजको नाममा रहेको नेपाल बैङ्क लिमिटेड सल्यानको खाता नं.०६४०००८४६६१० मा आफ्नो ईच्छा अनुसार सहयोग रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरे त्यस्तै बिदेशमा रहेनु हुने साथीहरुले रेमिट्यान्स मार्फत सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । साथै हेमराज सँग सिधा सम्पर्कको लागी उनको मोबाईल नं. 977-9847937144 रहेको छ ।